Banijya News | » नेपालबाट मुस्ताङलाई टुक्र्याएर तिब्बत कब्जा गर्न विदेशीले गराएको बिद्रोह ! नेपालबाट मुस्ताङलाई टुक्र्याएर तिब्बत कब्जा गर्न विदेशीले गराएको बिद्रोह ! – Banijya News
नेपालबाट मुस्ताङलाई टुक्र्याएर तिब्बत कब्जा गर्न विदेशीले गराएको बिद्रोह !
२४ आश्विन २०७६
खम्पाहरू त्यसताका उत्तरी सीमा क्षेत्र कब्जा गरी चीनमाथि गुरिल्ला आक्रमण तथा मुस्ताङ क्षेत्रका नेपाली जनतामाथि अराजक तथा अवैध शासन गर्थे। तिनै अराजक खम्पाहरूको हतियार लिँदै खम्पाहरूलाई गैरसैनिक जीवनमा पुनस्र्थापना गर्ने कार्यको मूल संघर्ष र सफलता २०३१ सालको यही साउनभदौमा नेपाली सेनाले हासिल गरेको पनि ठ्याक्कै अहिले ४० वर्ष पूरा भएछ। मुस्ताङ र दार्चुलामा गरिएका उक्त अप्रेसनका पूरै अवधि काठमाडौंस्थित जंगी अड्डाको अप्रेसनल सञ्चार केन्द्रको एकमात्र सिग्नल अधिकारी म थिएँ। क्याप्टेन थिएँ म। सार्वजनिक भइसकेका तथ्यांक र मेरा निजी स्मरणका सिलसिलामा म खम्पाकाण्ड यस्तो पाउँछु।
खम्पाहरू सुरुमा दार्चुलाको व्यास उपत्यका टिंकर क्षेत्र तथा मुस्ताङ, रसुवा हुँदै पूर्व ओलाङचुंगोलासम्म बसेका थिए। भारतको धर्मशालाका तालिमप्राप्त सयौं लडाकू खम्पाहरूले विशेष गरी जोमसोम तथा आसपासका विभिन्‍न स्थानमा क्याम्पहरू बनाएर कयौं वर्षदेखि चीनमा छिरी विध्वंस मच्चाउँथे। जोमसोमबाट उत्तर करिब चारपाँच घन्टा कठिन हिँडाइमा पुगिने साढे एघार हजार फिटको केसाङमा उनीहरूको हेक्वा थियो। पहिले जनरल बाबा हिसी कमान्डर थिए। कठिन जीवनबाट बहुसंख्यक गुरिल्लाहरू थाकिसकेका र धमाधम छोडेर भाग्न थालेका हुँदा तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सीआईएको पहलमा विदेशमा तालिम गराइएका उग्र, कडा जनरल वाङ्दीलाई कमान्ड दिइयो। जनरल हिसी ठूलै असन्तुष्टित समूह लिएर काठमाडौं पुगेका थिए। पछि सैनिक अप्रेसनको तयारी र कार्यान्वयनका लागि उनका सूचना तथा गाइडहरूको सहयोग उपयोगी रह्यो।
अन्य क्याम्पहरू मुस्ताङका कागबेनी, थिनी, छुसाङ, समार, ढिलिङ, धामी, साम्दा, चराङ, पाङ्गाच्या, मुक्तिनाथ र मनाङमा थिए। सानो स्टल एयर क्राफ्ट पनि ल्यान्ड गर्छ भनिएको साढे सत्र हजार फिटको पठार टांगे भ्युमा अमेरिकन सी १३० सप्लाई जहाजले एयर ड्रप गर्थ्‍यो।
खाम क्षेत्रवासी खम्पा सयौं वर्ष अघिदेखि धर्मको नाममा आमगरिब जनतालाई लुटेर लुटको केही अंश गुम्बाका लामाहरूलाई बुझाउने जातका लडाकू, सुरा व्यक्ति हुन्। चीनका विरुद्ध लडाकूमा बहुसंख्यक तिनैलाई प्रयोग गर्न थालियो। त्यो बेला मुस्ताङमा वास्तवमा नेपालको शासनै थिएन भन्दा पनि हुन्छ। घटनाका बेला नेपाली सेनाका पूर्वकर्णेल शैलेन्द्रबहादुर महत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा गृहका प्रतिनिधि थिए।
खम्पाहरू तिब्बत घुसी आमजनतालाई बलात्कार गर्ने, लुट्ने, घरहरू आगो लगाउने, चौंरी र भेडाहरू मारेर मासु ल्याउने आदि गर्छन् भन्ने आरोपसहित चीन सरकारले नेपाललाई दबाब दियो। चीन आफैं पसेर खम्पा क्याम्पहरू ध्वस्त पार्ने संकेत पनि दियो रे भन्ने पनि सुनियो। २०३१ सालको प्रारम्भमा सेनाका प्रधानसेनापति सिंहबहादुर बस्न्यातलाई एक्सनको आदेश आयो। तत्कालीन सहायक रथी सिंहप्रताप शाहलाई अपे्रसन कमान्डर नियुक्त गरियो, युद्ध भनिएन। सैनिक अभ्यास (तालिम) भनियो। सायद भारत र अमेरिकालाई नचिढ्याउन कूटनीतिक विडम्बना थियो त्यो।
पोखरास्थित श्रीनाथ गणको दुई कम्पनी, इन्द्रध्वज कम्पनी र नारायण दल कम्पनी अनि एक बन्दोबस्ती प्लाटुन मिलाएर एक बलियो अभ्यास गण बनाई त्यसका कमान्डरमा लेक सत्चितशमशेरलाई तोकियो। साथमा राजदलका तोपहरू, गणेश दलका सञ्चार तथा कालीप्रसाद गणका फिल्ड इन्जिनियरिङ साधनहरूसमेत समावेश एक बलियो शक्ति तयार भयो। भैरवी दल कम्पनीलगायत अन्य स्थानहरूबाट पनि टुक्रा फौजहरू संकलन गरी विभिन्न रोलमा उपयोग गरिएको थियो। प्रारम्भमा सत्चित आफैं जोमसोम पुगेर प्रशासकीय अधिकृत तथा स्थानीयवासीसँग सूचना बटुलेर फर्के। सैनिक भाषामा रेकी चरण पूरा गरे।
पोखरामा एकत्रित विभिन्न स्थानबाट आएका फौजलाई संयुक्त संगठनात्मक एकरूपता तथा आपसी मिलाप र समन्वयको चरणपश्चात् मुभ सुरु भयो। पोखरा, नौडाँडा, हिले, घोडेपानी, शिखा, धासा, लेटे र मार्फा हुँदै १ असार २०३१ (१५ जुलाई १९७४) मा जोमसोम पुगे। टुकडीहरू विभिन्न स्थानमा खटिए, तिनले आफ्नो प्रभाव जमाउन फ्लाग मार्च अर्थात् सैनिक मुभमेन्टहरू व्यापक रूपमा गरेर सेना साँच्चिकै खम्पाहरूलाई हटाउनै आएका हुन् भन्ने सन्देश प्रचारित गर्न थाले। भागेको रोक्नलाई पहिले नै बेग्लै रुटबाट छार्का र मनाङमा स्वतन्त्र फौज तैनाथ भइसकिएको थियो। जोमसोममा ब्रिगेडिएर जनरल सिंहप्रताप शाहले ट्याक्टिकल हेक्वा स्थापना गरे। तत्कालै तोपहरूबाट फायरिङ गरी मनोवैज्ञानिक दबाब दिने कार्य सुरु भयो। फौज तैनाथ र मनोवैज्ञानिक युद्धको पहिलो चरणपछि हतियार बुझाई आत्मसमर्पण गर्नु अन्यथा सेना कारबाही गर्न तयार छ भन्ने भाकाको पत्र वाङ्दीलाई सिंहप्रतापले प्रेसित गरे। तत्कालै ५ साउन(२० जुलाई) सम्म आत्मसमर्पण गरी हतियार बुझाइने प्रत्युत्तर प्राप्त भयो।
आशा गरेकोभन्दा शीघ्रको यो सकारात्मक जवाफले युद्ध टरेको अनुभूति भयो तर सेनाको मुभमेन्ट कम भएन। अझै व्यापक सक्रियता प्रदर्शन गरिँदै गयो। फेरि ११ गतेसम्मको म्याद थप मागे वाङ्दीले। फेरि १६ साउन मध्यरातसम्ममा सम्पूर्ण हतियार बुझाइसक्ने म्याद थपे। अभिलेखमा यी मितिहरू अंकित भए पनि मैले सम्झेअनुसार बीचबीचमा केही हतियार करिब बीसपच्चीस थान विभिन्न क्याम्पबाट ल्याएर बुझाएका थिए। त्यही बेला हेक्वाबाट एक गोप्य मेसेज उता पठाउन मेरो हात परेको थियो। यसलाई मैले तत्कालै कोड बनाएर पठाएको थिएँ। उक्त कुराले यता काठमाडौंमा अरू नै खिचडी पाकिरहेको अनुभव भयो मलाई।
उता फौजलाई जीवनमृत्युको दोसाँधमा खटाएर यता दरबार ठीक माओवादी कालमा झैं भित्रभित्रै कुनै स्रोतसित कार्य गरिरहेको थियो। सो स्रोतले त्यस बेला पनि माओवादीले झैं झुक्याएर अन्त्यमा वाङ्दी भागेर गएका थिए। हिस्ट्री रिपिट्स इटसेल्फ। सीधा सिंहप्रतापलाई सम्बोधन गरिएको अति गोप्य सन्देश थियो, ‘वाङ्दी हाम्रा मित्र हुन्, उसलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि चालीसपचास सशस्त्र गार्ड राख्न दिनू। अन्त्यमा उसले सबै बुझाएर आफू पनि आत्मसमर्पण गर्नेछ।’ दस्तखत व्यवस्था युद्ध निर्देशक सहायक रथी भरतकेशर सिंहको थियो।
(स्टाब्लिसमेन्ट २२ – अमेरिकी गुप्‍तचर संस्था सीआईएले अन्य खम्पा विद्रोहीलाई तालिम दिन भारतीय गुप्तचर संस्थाहरू इन्टेलिजेन्स ब्युरो (आईबी) र पछि ‘र’ सँग मिलेर भारत, देहरादुनको चक्राता भन्‍ने स्थानमा पनि ‘स्टाब्लिसमेन्ट २२’ प्रशिक्षण शिविर सञ्‍चालन गरेको थियो। दलाइ लामा र नेपालमा परिचालित खम्पाहरूलाई तालिम र हातहतियारका साथै अन्य खर्चका लागि सीआईएले हरेक वर्ष १७ लाख अमेरिकी डलर दिने गरेको थियो। सन् १९७२ मा रिचर्ड निक्सन अमेरिकी राष्ट्रपति बनेपछि यो सहयोग बन्द गरियो। – नेपाली सेनाका प्रेमसिंह बस्न्यातद्वारा लिखित ‘नेप्लिज आर्मी इन टिबेटन खम्पा डिस्आर्मिङ मिसन’बाट साभार)
दरबारबाट सेनाले पाएको आदेश यस्तो थियो। यही पत्रका आधारमा फिल्डको सेनाका हातबाट वाङ्दी उम्किन सफल भयो। तर, सेनाभित्र धेरै कमलाई यो मेसेजबारे ज्ञात छ।
मुस्ताङलाई नेपालबाट अलग पारी तिब्बत रिक्याप्चरका लागि आधारभूमि बनाउने लक्ष्य दलाइ लामाको भएकाले सेनालाई खम्पाले प्रतिकार गर्ने खबर स्थानीयले दिएकाले फौज सतर्क थियो। यदि सेना आएमा नेपालकै विरुद्ध लड्ने आदेशको टेप स्वयं दलाइ लामाको स्वरमा पठाएकाले वाङ्दीले आत्मसमपर्ण गर्ने भनाइ षड्यन्त्र हो भन्थे स्थानीयवासी। तर, धेरै खम्पाले सेनासित आत्मसमर्पण गर्न चाहेका कारण वाङ्दी कमजोर हुन गएका हुन्। नेपाल राज्यको जमिन कब्जा गरेर मित्रराष्ट्रमाथि आक्रमण गराउने यिनै दलाइ लामा हुन् भन्‍ने तथ्य आजका सन्दर्भमा पनि बिर्सन हुँदैन।
म्याद नाघेपछि जोमसोमबाट साउन १७ गते सेनाले आक्रमणको कारबाही गर्‍यो। चारैतिरबाट घेर्दै र तोपको फायरसहित केसाङ क्याम्प घेर्दासमेत कतैबाट प्रतिकार आएन। चेतावनी दिँदा पनि कुनै जवाफ नआएपछि क्याम्पमा धावा बोलेर कब्जा गरी जमिनमुनि लुकाइएका हातहतियार र गठ्ठा भारी मात्रामा जफत गरियो। वाङ्दीले धोका दिएर भागेको तथ्य सेनाको शरणमा आएका खम्पाहरूले बताए। सोही दिन बिहान ९ बजेतिर वाङ्दीलाई भाग्न नदिने र ठोक्ने आदेश जारी भयो। अर्को दिनबाट अक्रामक तरिकाले छुसाङ, समार, घिलिङ तथा धमी क्याम्पहरू कब्जा गर्दै हतियार र केही खम्पालाई पक्रन सफल भयो। सेनाका अनुसार त्यो बेला बरामद गरिएका विभिन्न देशमा बनेका आधुनिक हतियारमा राइफल पाँच सय ४३ वटा, ब्रेन गन ७५ वटा, स्टेन गन ३५ वटा, पिस्टल १६ वटा, ६० मिमि मोर्टार आठ वटा, ५७ मिमि आरसियल सातवटा, ६० मिमि बम तीन सय ८५ वटा, ५५ मिमि बम तीन सय २० वटा, गोलीहरू दुई लाखभन्दा बढी तथा पाँच थान सञ्चार सेटलगायत अन्य सानातिना युद्ध सामग्री थिए।
५०/६० जना आफ्ना नजिकका खम्पा सैनिकसहित थुप्रै खच्चडमा लाखौं नगद, अत्याधुनिक हतियार तथा बहुमूल्य सामग्रीहरू लिएर गएको जानकारी पक्रिएका खम्पाहरूले दिए। मनाङ र मुस्ताङमा व्यापक खोजी गरियो। कागबेनी र झारखण्ड जाने टोलीले घमीमा वाङ्दीहरूले मारेको चौंरीका चिह्न भेटे पनि त्यसपछि उच्च इलाकामा ती हराए। युद्ध गर्न गएका हाम्रा सैनिकहरूसित हाइअल्टिच्युडका पोसाक तथा इक्विपमेन्ट तथा मेडिकल साधन पनि थिएन। अप्रेसनपछि सेनाले जोमसोममा हातैले एअरपोर्ट बनायो। सेनाको सहयोगमा सरकारले पासाङ नामक एक अद्भुत हर्टिकल्चर विज्ञको नेतृत्वमा मार्फामा एप्पल फार्मिङ र सागसब्जीको विकास गर्‍यो। स्थानीय जंगली स्याउमा जापानी स्याउको कलमी गरेपछि ठूलो स्याउ उत्पादन हुन थाल्यो। मुस्ताङेहरू देशकै उत्कृष्ट स्याउ र सब्जी उब्जाउन सफल भए। आजको विकसित जोमसोमको नाम लिँदा सेना र ती पासाङको नाम भुले पाप लाग्छ।
वाङ्दी कता गए थाहा नभए पनि जंगी अड्डाले पूर्वपश्चिम दुवै दिशातिरका फौजलाई चनाखो बनाइरह्यो। अचानक सेप्टेम्बर पहिलो हप्तातिर सिमीकोटको यारी गाउँको प्रहरीचौकीबाट प्राप्त सूचना आयो। यो विवरण मेरो स्मरणअनुसार हो। पुरानो मेसेज खोजे भेटिन्छ। अन्यत्र प्रमाणित पूर्ण पाठ प्राप्त नहोला। वाङ्दीको टिमले गाउँमा राति चौंरी लुटेर भोज खायो। नाचगान गरी केटीहरूलाई जबर्जस्ती ग:यो। उनीहरूले भोलिपल्ट बिहान गाउँमाथिको चौकी कब्जा गरे, हतियार लुटे। तर, वायरलेस सेट भने बिगारेनन्।
तेरो सरकारलाई हामी सेप्टेम्बर (सायद १० थियो कि?) मा सिमानामा हतियार बुझाइदिन्छौं भनेर खबर गर् भनेर हिँडे। बलात्कारको खबर गोरखापत्रमा छापियो। राष्ट्रिय पञ्चायतमा माननीयहरूले उधुम मच्चाए र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागे। सेनालाई कम आँकेरै उक्त सेट नबिगारेर सन्देश दिइएको हो। तर, सेना सोचेजस्तो कम नभएकाले वाङ्दीको काल अवश्यम्भावी हुन पुग्यो।
खबर प्राप्त हुनासाथ जंगी अड्डाले पश्चिम र सुदूरपश्चिमका वाहिनीपति ब्रिगेडियर जर्नेल आदित्यशमशेरलाई ‘गो अहेड’ दियो। कुनै पनि हालतमा वाङ्दीका शकुनी जालमा नपर्ने मनस्थितिका आदित्यशमशेरले तत्कालै जमिनको मिहिन अध्ययन गरेर फस्ट राइफल गण र अह्रिदमन कम्पनीलाई विभिन्न ठाउँमा अक्रामक एम्बुसको ठोक् आदेश दिए। नभन्दै वाहिनीपतिको मूल्यांकनअनुसार नै अह्रीदमन कम्पनीका जमदार दानबहादुर चन्द नेतृत्वमा तिनै देशको सिमानाकै केही सय मिटरको टिंकर पासमा रहेको जालमा अन्तत: खम्पा काण्डकै विसर्जन भयो। र, सेनाको नाम फेरि उच्च भयो। तोकिएको निकै दिनसम्म कुनै गतिविधि नभए पनि फौज धैर्य गरेर बसिरह्यो। अन्य ठाउँबाट भागिसकेको शंका पनि काठमाडौंमा गरिएको थियो। तर, सेप्टेम्बर १५ (भदौ ३० हो कि) मा बिहानीपख अचानक टिंकर लिपुको एम्बुसमा थुप्रै खच्चरका साथ खम्पाहरूको लस्कर देखा पर्‍यो। छेउमा आइपुगेपछि फौजले फायर खोले। अगाडिका केही व्यक्ति सोत्तर भए।
सबै भागेर अग्लो भाग भएको चीनतिर पसे। केही समयपछि संगठित भएर फायर गर्दै पोजिसन लिएर घटनास्थलमा प्रत्याक्रमण गरे। केही खम्पाले धेरै बेरसम्म लास तानेर लैजान भयानक प्रयत्‍न गरे पनि सेनाको कडा प्रहारका कारण सकेनन्। भोलिपल्ट थाहा भयो, वाङ्दीको लास लैजान प्रत्याक्रमण गरेका रहेछन्। यदि लास लगेको भए आजसम्म पनि वाङ्दीलाई जीवित मान्न कर लाग्थ्यो र सेनाको नाममा खम्पा काण्ड असफल घटनाका रूपमा रहिरहन्थ्यो। साँझ अँध्यारो नभएसम्म खम्पाले मोर्टर तोपलगायत हरेक हतियारले फायर गरे पनि लास लान सकेनन्।
केही सय मिटर पर भारतीय सीमामा भारतीय सुरक्षाकर्मी पनि युद्ध हेरेरै बसे। पछि पुल तरेपछि स्वागत गरेको देखिएको थियो। त्यस्तै चीनबाट पनि फायर सुनेर केही परबाट आइपुगेका सुरक्षाकर्मी पनि हेर्दै गरेका थिए। राति खोजतलासमा फेला परेका घाइतेहरूले वाङ्दी मरेको सूचना दिएर लास चिनाए। भोलिपल्ट काठमाडौंबाट पठाइएको हेलिकोप्टरमा वाहिनीपति स्वयं गए। फौजलाई हौसला दिई वाहिनीपति फर्के।
पक्रिएकाका भनाइमा वाङ्दी धेरैजसो यात्रामा चीनको भूभागबाट हिँडेर आएका थिए। तीनचार गु्रप बनाएर आफू गु्रप बदल्दै हिँड्ने वाङ्दी बिहानमात्रै इन्डिया आइपुग्न लागेकाले पहिलो गु्रपको अग्रभागमा पुगेका रे। सेनाले यहाँ आएर यस्तो एक्सन लेला भन्ने उनलाई कल्पना पनि थिएन रे। अर्को दिन फोटोग्राफर लप्टन चन्द्रबहादुर थापा र स्वयं हिसी गएर सनाखत भएपछि सरकारले फुक्यो। त्यसपछि गृहमन्त्री जोगमेहर श्रेष्ठले हाउसमा भने, ‘माननीयज्यूको निर्देशनअनुसार हामीले आततायीहरूमाथि कारबाही गर्ने आदेश दियौं र सुरक्षाकर्मीले तत्कालै वाङ्दीलाई मारेर सजाय दिए।’
-थापा नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त उपरथी हुन्। २०७१ सालमा खम्पा काण्ड ४० बर्ष काटेको अवसरमा लेखिएको आलेखबाट